Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha iiNdawo zokuHlala zaBafundi beKholeji 2022
Oktobha 5, 2020 SAN
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha iiNdawo zokuHlala zaBafundi beKholeji
Uninzi lwethu luye lwadlula kwinkqubo yokuthatha isigqibo sokuba singathanda ukuhlala kwiikhampasi okanye hayi. Esinye sezigqibo ezinzima kakhulu ekufuneka sizenzile kukukhetha indawo efanelekileyo yokulala kwimfundo yethu.
Kungayinto ecekisekayo ukucinga ukuba wonke umfundi wasekholejini sele eyazi indlela yokuxelela ukuba yeyiphi i-dorm anokukhetha kuyo. Le yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngumfundi ngamnye wasekholejini ngaphambi kokuba babonise ikhampasi ukukhetha indawo yabo yokulala.
Ke, nantsi into ekufuneka uyigcine engqondweni xa usenza isigqibo malunga nokuba yeyiphi i-dorm oza kubambelela kuyo xa kufikwa kumba wokuthatha isigqibo Indawo yokuhlala yeYunivesithi yaseSheffield.
Nokuba iDorm iza ifakiwe okanye ayikho
Enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo yindawo yokulala oyikhethayo. Njengoko ndiqinisekile ukuba uyazi, ikhampasi nganye ineemfuno zayo zohlobo lweedorm ezikhoyo kwikhampasi.
Umzekelo, ezinye iindawo zokulala zinokungavunyelwa ukuba nazo naziphi na izilwanyana. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba indawo nganye yokulala inokubekwa kwindawo eyahlukileyo ekhampasini kunezinye.
Ke, xa ukhetha idolophu yasekholejini, qiniseka ukuba ukhetha enye ekufutshane nendawo oza kuya kuyo kwiiklasi zakho.
Ukuchola indawo yokulala ekude kakhulu neeklasi zakho kuya kukwenza uqaphele ngokukhawuleza ukuba ungonga ixesha elingakanani ukuba ubukhangele into esondeleyo.
Uninzi lweekhampasi zekholeji eneneni zinezithintelo ekubeni bangaphi abafundi abavunyelweyo ukuhlala kwidorm enye. Ukuba uhlala kwikhampasi apho uya kuba neyakho enye idorm, kuya kufuneka ukwazi ukufumana indawo efanelekileyo yokuhlala efanelekileyo kwiimfuno zakho.
Nangona kunjalo, ukuba uza kwabelana ngedorm nabanye abafundi abaninzi, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba unendawo eyoneleyo yokulingana wonke umntu kakuhle. Ngale ndlela, awuyi kuphela uziva uxinekile kwindawo encinci.
Ukuba ne-dorm enkulu ngokwaneleyo ukulungiselela wonke umntu kuya kunceda ukunqanda ezinye iingxaki kwixa elizayo.
Uhlobo lwe-dorm okhetha ukuhlala kulo luya kuxhomekeka ikakhulu kukhetho lwakho kunye nohlobo oluthile lwekholeji oyifaka kuyo. Umzekelo, ukuba ufaka isicelo kwiyunivesithi enkulu, ke uya kuba nakho ukukhangela indawo yokulala edityanisiweyo.
Olunye uhlobo oluqhelekileyo lwe-dorm yindawo yokulala yesitayile, engaphezulu okanye engaphantsi ngokufanayo kwigumbi lokufundela, elinomahluko omncinci.
Olunye umahluko lubandakanya into yokuba abafundi abahlala kwezi ntlobo zeedorm babelana ngendlu yangasese nekhitshi. Ezi ntlobo zeedorms zibonelela ngokulula kakhulu kunye nokuguquguquka okukhulu kwabafundi.
Enye into ebalulekileyo ekukhetheni i-dorm entsha iyonke indleko zokuphila. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba indlu yakho entsha ibonelela ngendlu efikelelekayo.
Umzekelo, ukuba ungumama ongatshatanga, usenokungabi nayo imali eyoneleyo yokuhlawulela izifundo zakho ukuba awuhlali kwidorm enikezela ngamaxabiso ezindlu ancitshisiweyo. Kungenzeka ukuba uhlale kwigumbi elinenkxaso-mali okanye kwigumbi eliyinxalenye yeekholeji zokulala.
Nangona kunjalo, ukuba ucwangcisa ukuhlala kwigumbi lakho lokulala, yazi iindleko zokuhlala kwigumbi lokulala okanye umntu ongatshatanga. Oku kubandakanya umbane, amanzi, ubushushu, kunye nezinye izinto eziluncedo. Qiniseka ukuba uyakwazi ukuzihlawulela ezi ndleko ngaphambi kokuba ungene.
Ifanitshala yenye yezinto zokuqala onokucinga ngazo xa uhlala kwiidorm. Uninzi lweedorms zomgangatho odibeneyo okanye ongaphantsi omnye unamagumbi amabini okanye amathathu anendawo yokuhlala eqhelekileyo kunye nendawo yokutyela, emva koko alale.
Ubungakanani bala magumbi buya kwahluka ngendlu nganye, kunye nokuba zingaphi iibhedi ezisetyenzisiweyo kunye nobukhulu bazo. Ifenitshala yezi ndawo zixhaphakileyo, okanye amagumbi ngamanye, ahlala ekhethwe ngokusekwe kubungakanani bendawo, lula, kunye neendleko ezikhoyo.
Ezinye izikolo zibonelela ngeendawo zokulala ezinabafundi bazo, ngelixa ezinye zibonelela ngeendawo zokulala kwaye unoxanduva lokubonelela ngendawo yokulala. ukuyenza ibonakale inesitayile.
Nangona abantu abaninzi bengacingi kakhulu malunga nedorm abayifunayo xa kuziwa ekukhetheni i-dorm elungileyo, khumbula ukukhetha indawo efanelekileyo yokulala kunokuthetha umahluko phakathi kokukhululeka unyaka wonke okanye ujongene namalungiselelo akho okuhlala.
Xa ujonge indawo yokulala, jonga ezinye zezinto zingentla ukwenza ukukhangela kwe-dorm yakho kube lula kwaye kukhawuleze. Ukulandela la manyathelo angentla kuya kukugcina ekukhetheni idorm engahambelani neemfuno zakho kwaye iya kukunceda uphephe iingxaki kwixa elizayo.
Post Previous:Faka isicelo se-Unicaf Scholarship namhlanje!
Okulandelayo Post:I-22 iYunivesithi yaseToronto yasimahla kwaye ihlawulwe iikhosi ezikwi-Intanethi